I-Chalet Bella Vista - ukufikelela kweLake - SPA - 4 bdrms - I-Airbnb
I-Chalet Bella Vista - ukufikelela kweLake - SPA - 4 bdrms
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguIrina & Romulus
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-7 Nov.
Ikhabhinethi efudumeleyo nepholileyo isandula ukwakhiwa ngokufikelela kwichibi elihle lentaba kunye nemibono emihle yeentaba, ebekwe iyure enye ukusuka eMontreal kwindawo enemithi, ikunikeza ubumfihlo obufunwa kakhulu ngempelaveki okanye iholide.
Okthobha 2020-Uhlaziyo lomgaqo-nkqubo wembuyekezo-Ngokwemeko yangoku sinikezela ngembuyiselo epheleleyo yogcino lwakho kwiintsuku ezi-5 ngaphambi komhla wokufika. Kwimeko yokurhoxiswa, ngaphantsi kweentsuku ezi-5 ngaphambi kokufika, i-50% yemali yokubhuka iya kuhlawuliswa.
Ukufikelela echibini yimizuzu eyi-8-10 kuphela yokuhamba ukusuka kwikhabhathi. Isinyathelo esincinci kwaye ulapho, kanye elunxwemeni lwechibi elicacileyo kwindawo yokuphupha. Ungaloba ibrook trout (truite mouchetée) okanye utsibe echibini kwaye uqubhe.
Ingaphakathi elifudumeleyo libanzi kakhulu kwaye i-cabin ingahlala abantu abayi-10.
Nantsi indlela abekwe ngayo amagumbi...
Kumgangatho ophantsi: Igumbi elikhulu losapho elinendawo yomlilo yeenkuni, itafile yonyawo lomntwana kunye negumbi lokuhlambela elineshawa.
Kumgangatho woku-1: Igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela elinendawo yomlilo yepropane, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, Igumbi lokuhlambela.
Umgangatho we-2: Amagumbi okulala ama-4 aneebhedi zendlovukazi - enye yamagumbi okulala inebhedi yesofa.
4 amaxesha spa 6 ukuba 7 iindawo, BBQ, ifenitshala yangaphandle.
Indawo yomlilo yangaphandle enenkuni enikeziweyo (engasetyenziswa ebusika).
-I-Skis slopes kunye ne-tube sliding eMontcalm (i-12 ukuya kwi-15 mins)
-I-Mont Garceau St-Donat ski slopes (malunga ne-30 mins)
- Ukutyibiliza ekhephini
- Ukurenta ibhayisekile entabeni Cherstey
-Inja yesileyi (Rawdon)
-Irenki yokutyibiliza echibini e-Ste-Marguerite du Lac Masson kunye nezileyi zezinja (imizuzu engama-27)
-I-Arctic Aventure (Irenti yemoto yekhephu)
- Ukuloba okanye ukuqubha nje imizuzu eyi-8 ukuya kweli-10 ukusuka kwigumbi lokuhlala
I-Atlantide complex, ipaki yamanzi (imizuzu eyi-10)
-3 iilwandle ezibekwe kwiidolophu zaseRawdon, Entrelac naseSaint alphonse de Rodriguez
-Ipaki yoMmandla yehlathi laseOuareau eNotre Dame de la Merci
- Ipaki yeengxangxasi zeRawdon
- Ikhosi yegalufa eMontcalm
Iklabhu yegalufa ye-L'Esterel (iikhilomitha ezingama-20)
- Isilayidi esisemoyeni eRawdon
- Ipaki yeNgingqi yaseDorwin Falls eRawdon
-Uhambo lwamahashe kumahashe acocekileyo e-Estérel (imizuzu eyi-10-15) - Cavaland
Umbuki zindwendwe ngu- Irina & Romulus
Ifumaneka ngefowuni, i-imeyile okanye umyalezo obhaliweyo.